ဗေဒင် Archives - Page 22 of 30 - Latest Myanmar News
စိတျရငျးကောငျး သလောကျ အားနာလညျးကွီးတတျတဲ့ အင်ျဂါ သားသမီးတို့၏ စိတျနစေိတျထား
October 10, 2020 by Latest Myanmar News
Categories ဗေဒင် Tags အင်ျဂါ
October 7, 2020 by Latest Myanmar News
မိ တ်ဆွေများအာလုံးမင်္ဂလာပါ။ မိမိ စီးပွားရေးတွင် အလုပ်များတွင်အကြွေးများနေလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် အမြန်အကြွးကြေ စေတဲ့ယတြာလေးပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်က ပန်းကန်ပြားတစ်ချက်ပေါ်တွင် မိမိလက်ဖြင့် ဆန်လက်တစ်ဆုပ် ထည့်ပြီး ကြက်ဥပေါ်တွင် အရဟံဟု ရေးပါ။ ရေးပြီးလျင် ဖယေင်းတိုင်တစ်တိုင်ထွန်းပေးလိုက်ပါ။ (၃)ရက်ပြု လုပ်ပေးပါ။ (၃)ရက်တိတိ အမဲသား-ဝက်သား ရှောင်ပေးရမည်။ မိတ်ဆွေတို့၏ ကံဇာတာ အကောင်းအဆိုး များကို ဆရာနှင့်လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာထွန်းမင်းလတ် မနော်ဟရီ 45/46 ကြားမန္တလေးမြို့။ Ph/09255799210 Unicode မိ တျဆှမြေားအာလုံးမင်ျဂလာပါ။ မိမိ စီးပှားရေးတှငျ အလုပျမြားတှငျအကွှေးမြားနလေို့ စိတျညဈနရေတဲ့ မိတျဆှမြေားအတှကျ အမွနျအကွှးကွေ စတေဲ့ယတွာလေးပါ။ လုပျဆောငျခကျြက ပနျးကနျပွားတဈခကျြပျေါတှငျ မိမိလကျဖွငျ့ ဆနျလကျတဈဆုပျ ထညျ့ပွီး ကွကျဥပျေါတှငျ အရဟံဟု ရေးပါ။ ရေးပွီးလငျြ … Read more
September 23, 2020 by Latest Myanmar News
အိ မ်မက် အမျို;မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ချို့ အိမ်မက် တွေ က ရှေ့မှာ ဖြစ်လာ တော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ် ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို အရာ တွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးတွေ ရှိ ကောင်းရှိ နိုင် ပေမယ့် အပြင် မှာ တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့၊ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာ ဓက တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံဝင်ခါနီးရင် ဘယ်လို အိမ်မက် မျိုး တွေ မက် လေ့ရှိလဲဆိုတာကိုတော့ filipinotimes မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။ နို့ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည် အိမ်မက်ထဲမှာ နို့ တွေကို မက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည်ကို မက်တာ မျိုးက မကြာခင်မှာ ငွေ ဝင် … Read more
သင့် မွေးရက်မှပြောသော စိတ်ထား နှင့် ဂုဏ်သတ္တိများ
September 2, 2020 by Latest Myanmar News
တော်တော်မှန်ပါတယ် …. လိုချင်တဲ့ အချိန် ဖတ်ရအောင် ပြန်ကူးယူဖော်ပြသည် … မွေးနေ့..မွေးရက်များနဲ့ သူရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများ. တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 1st, 10th, 19th, 28th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၁) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 2nd, 11th, 20th, 29th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၂) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 3rd, 12th, 21st, 30th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၃) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 4th, 13th, 22nd, 31st မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. … Read more
ဈေးရောင်းကောင်းစေမည့်် ယတြာ
August 27, 2020 by Latest Myanmar News
ဈေးရောင်းချက်ချင်း …ကောင်းပါစေ… ဈေးဦးတောင် မပေါက်သော ၊အရောင်းအ၀ယ်အရမ်းကိုခက်ခဲ နေသော ရောင်းကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ အတွက် လက်တွေ့သိသိသာသာ ရောင်းကောင်း ဈေးဦးပေါက်စေသော ယတြာလေးတစ်ခု ပြောပြမယ်။ ကုန်စုံဆိုင်၊ ဆိုင်ထိုင် ရောင်းသောသူဖြစ်စေ ၊ဆိုင်ခန်းမရှိ ကား ၊လှည်း သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် လှည့်လည် ရောင်းချရသောသူ၊Online Shopping ၊ Live shopping အရောင်းအ၀ယ်သမားများ အားလုံး ယတြာကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လက်တွေ့ပြုလုပ်သော မည်သူမဆို ချက်ချင်းလက်ငင်းသိသိသာသာ ရောင်းဝယ်ကောင်းလာတာကိုလည်း တွေ့မြင်နေရပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးကို သကြားဖြူး၍ စားလိုက်ပါ။ တနင်္လင်္ာနေ့တွင် ဇီးထုတ် ၊ဇီးသီး မိမိအဆင်ပြေတာတစ်ခုကို စားသုံးပါ။ အင်္ဂင်္ါနေ့တွင် ရှောက်ယို၊ရေနွေး မိမိအဆင်ပြေတာကို စားသုံးပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မြေပဲကြော် ၊ပဲပြားကြော်၊ဘဲဥ မိမိအဆင်ပြေတာတစ်ခုကို စားသုံးပါ။ … Read more
August 25, 2020 by Latest Myanmar News
စနေသားသမီးများအတွက် တသက်စာ အသက်ကာလအရ အချိန်ကာလ တိကျစွာ ပြုလုပ်၍ လက်တွေ့ အကျိုးထူးစေမည့် နည်းလမ်း စနေဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက် (၁ ၉ ၁၇ ၂၅ ၃၃. ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃ ၈၁ ၈၉ ၉၇ )နှစ် များတွင် နေ့စဉ် နံနက် နေထွက်ချိန် မှ နံနက် ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ် အတွင်း မိမိအဆင်ပြေသောချိန်တွင် ၁။(သောရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိအောင်) ၂။(သောရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ) အနည်း ဆုံး ပုတီး ၁မျိုး ကို ၅ ပါတ် … Read more
အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခ န်း၊ကား အမြန်ရောင်းထွက်စေလိုနေလျှင်
အိမ်၊ ခြံမြေ၊ တိုက် ၊ကား အမြန်ရောင်းထွက်စေ။ နံပါတ်ရှိရင်လုပ်လို့ရတယ်။ ရေးရင်တော့ အက္ခရာနံပါတ် အပြည့်အစုံရေး။ ဥပမာ.. ကက..၆၇၃၈ ကား အမြန်ရောင်းထွက်စေ။အရွက်၇ရွက်စလုံးမှာရေး။ အရွက်က အပြန်အလှန်ရတယ်။ ဥပမာ ၄၂ ဖြစ်နေရင် ၂၄ ခရေ ကွမ်းရွက် လုပ်လို့ရတယ်။ သံပန်းကန်ဆိုတာကြွေ ရည်သုတ်ပန်းကန်၊အခုခေတ် စတီးအတု ပန်းကန် သံလိုက်ရင် သံပန်းကန်။ ဂမ္ဘီရဆရာ လှမျိုး Unicode အိမျ၊ ခွံမွေ၊ တိုကျ ၊ကား အမွနျရောငျးထှကျစေ။ နံပါတျရှိရငျလု ပျလို့ရတယျ။ ရေးရငျတော့ အ က်ခရာ နံပါတျ အပွညျ့အစုံရေး။ ဥပမာ.. ကက..၆၇၃၈ ကား အမွနျရောငျးထှကျစေ။အရှကျရရှကျစလုံးမှာရေး။ အရှကျက အပွနျအလှနျရတယျ။ ဥပမာ ၄၂ ဖွဈနရေငျ ၂၄ … Read more
လွယ်ကူမှန်ကန်တဲ့ ရှားမီးကိန်း တွက်နည်း
August 24, 2020 by Latest Myanmar News
အသုံးဝင် လွန်းတဲ့ရှားမီးကိန်း တွက်နည်း သိလိုသောသူ၏ ရောက်ဆဲအသက်ကိုတည် ၈ခုဖြင့်စားပါ။အကြွင်းကိုမိမိမွေးနံမှစ၍လက်ယာရစ် ရေတွက်ပါ။ရောက်ရာဂြိုဟ်အိမ်တွင်သမသတ်ရိုက်၍ဟောပါ။ ချရန်လင်္ကာ။ ။မိုး – စွေ – အုံ့ – ခါ – ရွာ -တော်- သာ – လှ ´ကျက်မှတ်ရန် ကဗျာ“ စောထွေနွဲ့နှောင်းစုတ်ကောင်းနဂို သူအိုယာယီကောလီစုတ်ကြီး ရှားမီးတွင်ကျမရဏ။ စောထွေ(၃-၇)=ကျသော်လာဘ်များဝင်၍ရွေ့ပြောင်းရန် မလိုပါ။ သူအို(၆-၁)=ယာယီရွှေ့ပြောင်းရမည်။ ကောလီ(၂-၄)=စုတ်ကြီးလာဘ်ကြီးဝင်မည်။ ရှားမီး(၈-၅)=အသက်အန္တရာယ်ရှိတတ်သည်။ဘေးရန်ပေါ်မည်။ရှားမီးပူဇော်ရမည်။သတိထားဆင်ခြင်ကာ နေထိုင်ရမည်။ မိုး=အကြွင်း ၅ စွေ= အကြွင်း ၃ အုံ့ = အကြွင်း ၁ ကာ = အကြွင်း ၂ ရွာ = အကြွင်း ၈ တော်= အကြွင်း ၇ သာ = အကြွင်း … Read more
ယတြာ ဖယောင်းတိုင် အလွယ်စီရင်နည်း
August 21, 2020 by Latest Myanmar News
အိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ ယတြာမီးတိုင်စီရင်နည်း ငွေလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် စီးပွားဆုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြံအစည် မအောင်မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်နှလုံးမချမ်းမြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ ယတြာမီးတိုင်ကို အိမ်မှာပြုလုပ်ပါ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စီရင်နည်းက… မိမိ လက်ဝါးအရှည်ထက်မလျော့တဲ့ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်ဖယောင်းတိုင်မှာ ထွင်းလို့ရမယ့် ကညစ်ဖြစ်ဖြစ် ဘောပင်ဖြစ်ဖြစ် ဒါဆိုရပါပြီ ဖယောင်းတိုင်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဂါထာကို ပတ်ပြီး ရေးပါ ရေးပြီးရင် ဖယောင်းတိုင်ကို ထိုဂါထာနဲ့ပဲ ၃၇ ခေါက်စုပ်ပါ ပြီးရင် နံသင့်သားပေါ်မှာ တင်ပြီး ဘုရားရှေ့မှာ ထွန်းပါ ဂါထာက ယထာဝိ ဥဏှေ ဝိဇ္ဇန္တေ ပရံ ဝိဇ္ဇာတိ သီတလံ ဧတံ တိပိဓ ဝိဇ္ဇန္တေ နိဗ္ဗာနံ ဣစ္ဆိတ တဗ္ဗကံ နံသင့်သားဆိုတာ တနင်္ဂနွေ အုန်းသား/အင်သား တနလာင်္ ကျွန်းသား အဂါင်္ … Read more